Kuzuzwe ukulawula full nalo nabaphathi hotel software esizukulwaneni esilandelayo!
Icala okufushane efakiwe-umnyuziki day-30 Thwebula ( 6,30 MB)
Top 10 izizathu ukuthenga Abacre Hotel Management System
Abacre Hotel Management System isizukulwane esisha software hotel / ukuphathwa Motel for Windows. It is a solution eliphelele, kusukela ukubhuka futhi uhlole ku / bheka, ziphethe nemibiko lokukhokhisa kanye nentela. Zokusetshenziswa ukubonwa is ngokucophelela elungiselelwe for high speed input kanye nokuvinjelwa amaphutha ezivamile. Ukuthi yenzelwe usebenzisa kumakhompyutha multiple, futhi iqukethe amazinga ukugunyazwa onokwethenjelwa evikelekile.
Uhlelo kungenziwa umisele yisiphi zezimali, izintela, futhi kwemihlomulo. Izinkokhelo kungenziwa ngamukeleke ukheshi, credit cards noma amasheke.
Ukuze izimenenja, kukhona isethi ocebile imibiko ebonisa ukuthi isithombe oluphelele ukusebenza lehhotela nokuphila Imijikelezo: yokuthengisa by ekamelweni, yokuthengisa by ekamelweni hlobo, oda Ukudayiswa zokudlela nobe okudayisa, izindlela zokukhokha, futhi othomathikhi kwentela ukubalisisa.
By ekwenzeni yonke inqubo yokuphatha ehhotela, isofthiwe kakhulu kuthuthukisa izinga guest handling kanye accounting.
Kulula ukufaka futhi kulula ukuyisebenzisa. Very ilayisense ezingabizi ivumela le software ukuze kusetshenziswe kunoma yiziphi imvelo kusuka amahhotela amancane emndenini-owned futhi ehhotela ngamaketanga ezinkulu.
Qaphela dlala isiqophi Tutorials on Youtube:
Isheke Simple in awubheke
Reservation, ngena awubheke
Complete umjikelezo: isabelo, ngena, oda restaurant kanye uhlole out